सबै तरकारीको भाउ आकाशियो - krishipost.com
सबै तरकारीको भाउ आकाशियो
कृषि पोष्ट संवाददाता
काठमाडौँ , ६ असोज ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा प्याज, आलुसहित हरियो तरकारीको पनि भाउ आकाशिएको छ । थोकको तुलनामा खुद्रा बजारमा भाउ तेब्बरसम्म बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्रतिकेजी ४८ रुपियाँमा किनबेच भइरहेको लौका कीर्तिपुरको खुद्रा पसलमा प्रतिकेजी ११० रुपियाँमा, ६८ देखि ९५ रुपियाँको गोलभेँडा १४० देखि १८० रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ ।भारतले प्याज निर्यातमा रोकेको भोलिपल्टै प्याज आकाशिएसँगै सबै तरकारी महँगिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने सरकारका नियमनकारी निकायले बजार हस्तक्षेप गर्न नसक्ने र बजार व्यापारी नियन्त्रित हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका बताउँछन् । उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चमा अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले तरकारी मात्र नभई खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा लगायतको भाउमा मनपरी रहेको बताए ।
नियमनकारी निकायहरू मिडियामा समाचार आएपछि मात्र बजारको अवलोकनमा जाने र सानातिनालाई जरिवाना गर्ने र ठूलामा जाँदै नजाने परिपाटी रहेको आरोप लगाए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन् ।
तपाई हरु संग पनि कृषि समचार, लेख वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected] मा पाउनुहोला 🙏
कुखुराको लागि हर्वल जडिबुटी औषधि : डा. केदार कार्की
डा. केदार कार्की कुखुरा पालन मिश्रीत खेतीको अभिन्न अंग मानिन्छ र ग्रामीण जनसमुदायको एउट...
कति गुनी छन् कुसुम, गान्टे र रामगुवा?
सामान्यजनलाई मात्र होइन, वनस्पतिविद्लाई समेत कमै मात्र जानकारी भएको डायोइसी प्रजातिका यी वनस्पति कुसुम,...
एक हजारबाट सुरु गरेको व्यवसायले करोडपति बनायो
अत्तरिया – व्यवसायबाट धेरै पैसा कमाउन धेरै लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने आम मानिसहरुको बुझाइ...
दुधको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, प्रतिलिटर कति ?
२८ पुस, काठमाडौं । पछिल्लो समय सबै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ...
दुधको मूल्य ह्वात्तै यति धेरै बढाउने तयारी, किसानलाई होला त राहत ?
ह्वात्तै बढ्यो प्याजको मूल्य,प्रतिकिलो कति पुग्यो त? हेर्नुहोस्
एकरूपता ल्याउन मासुको मूल्य निर्धारण
रसुवागढी नाकाबाट ३६ कन्टेनर स्याउ नेपाल भित्रियो
कृषि पढ्न इजरायल जाने विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा
काठमाडौं । इजरायलमा कृषि पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा नेपालमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था...
‘कस्तो हुँदोरहेछ भनेर कुरिलो खेती गरेका थियौं, आम्दानी त सोचेको भन्दा राम्रो भयो !
बाख्राको लागि आवश्यक डाले तथा भुईं घाँस वारे जानकारी !
कौशीमा कसरी तरकारी खेती गर्ने ? यी हुन् जान्नु पर्ने १० तरिका
अष्ट्रेलिया छोडेर आफ्नै गाउँमा बाख्रा पालन गर्ने युवकको मासिक आम्दानी १ लाख
Copyright © 2016 krishipost.com । सम्पर्क । हाम्रो बारे ।